बिहीवार कति छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ? « Lokpath
२०७७, २३ पुष बिहीवार ०७:५६
बिहीवार कति छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २३ पुष बिहीवार ०७:५६
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिवारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।
पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १३ पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २६ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हेर्नुहोस् पुरा जानकारी:
बढ्यो सुनको मूल्य, कति छ तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ५ सयले बृद्धि भएको छ
किन भाँडिन्छ ठूला बैंकको मर्जर ? यस्ता छन् मुख्य कारक तत्व
कमला अर्याल /काठमाडौँ – बैंक मर्जर सहज र सजिलो पक्कै छैन । मर्जपछि
तरकारीको मूल्य सार्वजनिक, कुनको कति ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिले बुधवारको लागि तरकारी तथा
म्याग्दी । म्याग्दीमा ६१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण सकेका छन् । विसं
कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन विश्वका ६० देशमा पुग्यो, एक हप्तामै गयो…